Ukulindela ulwalathiso lukaYehova! | UPepo Devidze
IBALI LOBOMI Wazalelwa kwiCawa yobuOthodoki yaseGeorgia kwaye ezenza zonke izinto zalapho. Emva kokufunda inyaniso yeBhayibhile, wasebenza eBheteli nomyeni wakhe. Ngoku bangoovulindlela abakhethekileyo.
NDAQALA ukuva ngamaNgqina xa ndandisekholeji kwisixeko saseKutaisi. Ummelwane wam wandixelela ukuba amaNgqina awayisebenzisi imifanekiso eqingqiweyo xa enqula kwaye awakholelwa ukuba uYesu nguThixo uSomandla. Oku kwakungqubana neenkolelo zam zecawa yobuOthodoki endandizithanda.
Xa ndabuyela kwidolophu yasekhaya, iTsageri, ngehlobo lango-1992, ndafumanisa ukuba amaNgqina ayeshumayela nalapho. Umama wayeve izinto ezininzi ezintle ngawo. Kodwa ekubeni ndandingawathandi ncam, wathi kum, “Hamba uyokuzivela ngokwakho oko akufundisayo.”
Oovulindlela abakhethekileyo ababini, uPavle noPaata, babedla ngokutyelela enye intsapho eyayihlala kwingingqi yethu. Abantu abaninzi ekuhlaleni babelixhakamfula eli thuba, baphulaphule baze babuze imibuzo. Nam ndaqonda ukuba makhe ndiye kwezo ncoko zabo. Sihlandlo ngasinye ndibuza umbuzo, abazalwana babetyhila iBhayibhile baze bandicele ukuba ndifunde. Ndayithanda kakhulu loo nto—ndazibonela ngawam amehlo oko kuthethwa yiBhayibhile!
Kungekudala, nam ndandisiya kwelinye iqela elalifundelwa iBhayibhile ngaba bazalwana. Kwihlobo elilandelayo, ndaba ngomnye wabalishumi ababhaptizwayo. Kamva, nomama waba liNgqina LikaYehova.
Xa ndijonga emva, ndiyababulela aba bazwalwana ngokundityhilela eBhayibhileni iimpendulo zemibuzo yam baze bandiyeke ndizifundele ngokwam. Loo nto yandinceda ndaphenduleka kuyo yonke imibuzo endandinayo ngeenkolelo zam. Ukukhumbula indlela okwandinceda ngayo ukutyhilelwa eBhayibhileni, kundenza nam ndisebenzise indlela efanayo ukuze ndincede abanye bayixabise inyaniso!